Duulimaadyada tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi oo la joojiyay. – Hornafrik Media Network
Duulimaadyada tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi oo la joojiyay.
By Liibaan Nuur	 On May 10, 2019
Muqdisho-Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Salaad Oomaar ayaa xaqiijiyay wararka sheegaya in dowladda Kenya ay joojisay duulimaadyadii sida tooska ah uga bixi jiray magaalada Muqdisho, kuwaasoo tagi jiray garoonka diyaaradaha Joma Kenyatta ee Nairobi.
Wasiir Oomaar ayaa sheegay in gelinkii dambe ee Khamiistii ay soo gaartay warqad ka soo baxday laanta duulista Hawada ee dalka Kenya, taasoo ku xusneyd in wixii ka dambeeyay maanta oo Jimco ah 10-ka May, diyaaradaha ka baxa Muqdisho ay mari doonaan Garoonka Diyaaradaha Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Salaad Oomaar ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray wararka sheegaya in arrimo amni ay la xiriirto tallaabadan cusub ee Kenya qaaday, isagoo ku faanay in amniga garoonka Muqdisho uu la mid yahay kuwa waa weyn ee Caalamka.
Duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi ayaa bilowday sanadkii 2017, kaddib markii dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay gaareen heshiisyo dhowr ah oo ku saabsanaa iskaashiga iyo socdaalka, waxaana wixii xilligaas ka dambeeyay diyaaradaha ka bixi jiray Muqdisho ayaa toos uga degi jiray garoonka diyaaradaha Joma Kenyatta, waxaana dadka ka baxa Muqdisho ku qaadan jirtay inay Nairobi ku tagaan saacad iyo bar.
Madaxda Galmudug ee Cadaado oo qaadacay shirka Garoowe.
Khilaaf ka taagan soo xulista Baarlamaanka Jubbaland.